Home » Travel Travel » Fipoahana volkano tampoka taorian'ny horohoron-tany
Ireo sary avy any Islandy momba ny fipoahan'ny volkano vaovao ook goavambe. Mijanona ny dia an-habakabaka amin'ity indray mitoraka ity ary tsy misy atahorana mivantana.
Fipoahana volkano iray any Islandy 40 kilaometatra atsimon'ny renivohitra Reykjavík
Ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Keflavik dia miasa ara-dalàna ary tsy voakitika ny fifamoivoizana amin'ny sidina.
Ilay fipoahana tsy nampoizina dia taorian'ny horohoron-tany lehibe tany an-toerana.
Ny mpizahatany dia tsy tokony manandrana manakaiky ny volkano na mandeha mankany amin'ny faritra misy ny fipoahana, araka ny fampitandremana nataon'ny Governemanta Islandy.
Ny lava-drano dia mandrakotra faritra iray izay manodidina ny 500 metatra ny sakany. Ny fipoahana dia voafetra amin'ny faritra kely ao amin'ny lohasaha Geldingadalir ary tsy azo inoana fa hiteraka fahasimbana amin'ny fotodrafitrasa ny fikorianan'ny lava.
Ny hetsika volkano manamorona ilay fisamborana nipoaka dia somary nihena nanomboka omaly. Ny loharano lava avy amin'ireo lava-bato eo amin'ny fisamborana mipoaka dia malemy ihany ary kely ny tahan'ny famoahana lava, hoy ny tatitra nataon'ny I Islandic Met Office (IMO) izay manara-maso ny fipoahana.
Horohoron-tany nahavaky firaketana mialoha ny fipoahana
Taorian'ny herinandro nihetsiketsika nandritra ny herinandro maromaro izay nahatratra ny horohoron-tany 50,000 24 mahery hatramin'ny 2021 febroary XNUMX dia nipoaka ihany ny rafitra volkanikanina Krysuvik Islandy. Ny isan'ny horohoron-tany voarakitra nandritra ny fananganana talohan'ilay fipoahana dia ny horohoron-tany lehibe indrindra noho ny horohorontany tany Islandy!
Raha ny filazan'ny Office Meteorological Islandy (IMO) Islandey dia nanomboka tamin'ny 8 ora sy sasany alina ny fipoahana tao Fagradalsfjall Geldingadalur. Ny fipoahana dia hita voalohany tamin'ny fakan-tsary miorina eo akaikiny. IMO koa dia nanamafy ny fipoahana tamin'ny sary zanabolana mafana.
Any amin'ny lohasaha sahabo ho 4.7 km miala ny morontsiraka atsimon'ny saikinosy no misy ny fisaratsarahana. Grindavik no faritra be olona akaiky indrindra izay misy 10 km atsimo andrefan'ny toerana misy ny fipoahana, saingy tsy onenana izy izao. Nanambara ny IMO fa ambany ny hetsika seismika sy ny fidiran'ny magma tato anatin'ny andro vitsivitsy. Horohoron-tany matetika dia voarakitra tao ambanin'i Fagradalsfjall ny marainan'ny andro.